Manchester United oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddig ka tirsan Kooxda Arsenal – Gool FM
(London) 27 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga Naadiga Arsenal ee Matteo Guendouzi.
Laacibka khadka dhexe ee Arsenal, Matteo Guendouzi ayaa lagu soo warramayaa inuu u muuqdo bartilmaameedka ugu macquulsan ee kooxda Manchester United.
Inkastoo uu markii hore isku muujiyay inuu yahay mid ka mid ah rajada ugu sarreysa ee kooxda kaddib markii uu ka soo dhaqaaqay Lorient, 21-sano jirkaan ayaa dhowaan hoos uga dhacay amarka ugu sarreeya ee ka hoos yimaada Macallin Mikel Arteta.
Kaddib markii uu muujiyay anshax xumo ka dhan ah xiddigaha Kooxda Brighton & Hove Albion isbuucii hore, Guendouzi ayaa laga saaray safkii ciyaaray kulankii Khamiista, taasoo dhalisay warar la isla dhexmarayo oo ku saabsan mustaqbalkiisa garoonka Emirates.
Xilli kooxo badan la la xiriirinayo xiddiga reer France, Wargeyska L’Equipe ee ka soo baxa Waddankaas ayaa sheegaya in Man United ay isha ku heyso xaaladda oo ay ku soo biirtay tartanka loogu jiro laacibkan khadka dhexe.
Kooxaha Barcelona, Atletico Madrid, Inter Milan iyo Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale la sheegay inay xiisaynayaan Guendouzi.
Thiago Alcantara oo tallaabo kale u qaaday ku biirista Kooxda Liverpool... (Maxaa soo kordhay?)